Maxkamadda Ciidamada oo sii deysay eedeysanayaal lagu waayay dambi. | Shabakadda Garsoor
Home Your Old Categories CIIDAMADA Maxkamadda Ciidamada oo sii deysay eedeysanayaal lagu waayay dambi.
Maxkamadda Ciidamada oo sii deysay eedeysanayaal lagu waayay dambi.
Muqdisho (Garsoor)- Saldhiga degmada Dharkenley ayaa 25ka bishii sagaalaad ee sanadkan u soo gudbiyay xafiisk Xeer Ilaalinta Ciidamada Qalabka Side eed ka dhan ah Dable Cali Maxamuud Axmed, Cabdixaaji Bashiir, Axamed Cabdirisaaq Axmed iyo Cabdifatax Cabduqaadir Axmed oo kawada tirsan Ciidamada Asluubta kuwaasi oo ay soo gudbiyeen ciidanka deeganka Garsabaaley oo sheegay in ay dhac geysanayeen Afartoodaba.
06 bishan ayay xafiiska Xeer Ilaalinta codsadeen in la muddeeyo dacwad qaadista afarta eedeysane, waxaana sedax cisha kadib Maxkamadda muddeysay kiiska, fadhiga hore ee Maxkamadda ayaa loo ballamay 11-ka bishan.
Previous articleRafcaanlayaal go’aan ay ka gaartay Maxkamadda Sare ee Ciidamada Qalabka Side